Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u ugaadhsadaan dadka xeebaha ku nool ee Talyaaniga ee faafiya COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u ugaadhsadaan dadka xeebaha ku nool ee Talyaaniga ee faafiya COVID-19
Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Xuquuqda Aadanaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Markay dayuuraddu ogaato qof qandho qaba, way aqoonsataa waxayna u sheegtaa kooxda dabagalka caafimaadka, kuwaas oo markaa goobta yimaada si baaritaan loogu sameeyo, taas oo horseedi karta baaritaan COVID-19.
Saraakiisha caafimaadka Rome si ay u geeyaan xeebaha Roomaanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay meel fog uga hubiyaan heerkulka dadka xeebta jooga ee Talyaaniga.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa loo adeegsan doonaa in lagula socdo COVID-19 lagana hortago xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka.
Saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ee Rome, Talyaanigu waxay dirayaan diyaarad drone ah si ay ugu duusho agagaarka xeebaha Ostia ee u dhow Rome, oo si otomaatig ah u hubiso heerkulka dhammaan dadka xeebta taga, si loo ogaado dadka qaba caabuqa COVID-19.
Diyaaradda 'caafimaad' ayaa loo qorsheeyay inay ilaaliso xeebaha Ostia, oo ku taal agagaarka Rome, dhammaadka toddobaadkan, laakiin tijaabada ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira saadaasha cimilada oo xun Sabtida iyo Axadda.
Sida laga soo xigtay Talyaani Saraakiisha caafimaadka, diyaaradda ayaa “si otomaatig ah” u cabbiri doonta heerkulka inta ay ka dul dul -socoto ugu yaraan 25m biyaha kana fogaanayso ugu yaraan 30m dadka. Duulimaadyada tijaabada ayaa la qorsheeyey inay socdaan shan saacadood, inta u dhexeysa 11ka subaxnimo ilaa 4ta galabnimo.
"Markay diyaaradda ogaato qof qandho leh, way aqoonsataa waxayna u digtaa kooxda dabagalka caafimaadka," ayay mas'uuliyiintu sheegeen. "Dhakhaatiirtu markaa waxay yimaadaan goobta si loo baaro, taas oo horseedi karta tijaabada COVID-19."
Saraakiisha ayaa ballanqaaday inay xushmeynayaan asturnaanta, iyagoo sheegay in kuwa fasaxa leh heerkul caadi ah aan la aqoonsan doonin.
Marta Branca, madaxa ASL Roma 3, oo ah hay'ad caafimaadka dadweynaha oo daboosha dhowr degmo oo ka tirsan caasimadda Talyaaniga, ayaa beenisay wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya in aaladda duulimaadka loo adeegsan doono ugaarsiga dadka faafiya cudurka.
Branca ayaa barteeda Twitter -ka ku soo qortay: “Waa uun hab lagu hubiyo in xanuun ama shil xeebta ama badda ku dhacay markiiba la ogaado oo aan hal daqiiqo lagu lumin dadaallada samatabbixinta. “Aabbahay sidaas ayuu u dhintay. Waxaa laga yaabaa, isagoo wata diyaaradaas inuu weli halkan joogi doono. ”
Isla mar ahaantaana, Branca waxay qiratay qaar ka mid ah habacsanaanta xagga isgaarsiinta ee ku saabsan hindisaha, iyadoo ballanqaaday inay ka fogaan doonto is -maandhaafka mustaqbalka.